गुप्तांगको दुर्गन्ध कसरि हटाउने ? घरेलु विधिबाट यसरी गर्नुस् उपचार « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
७ माघ २०७८, शुक्रबार । January 21, 2022
काठमाडौं उपत्यकामा भोलिदेखि जोरबिजोर प्रणाली लागु गरिने
यातायातमा वागमती मुलुककै नमुना बन्छ : यातायात मन्त्री दाहाल
शहरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (UIDP) अन्तर्गत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतमा छिन्चु बसपार्क आयोजनाका लागि ऋण सम्झौता सम्पन्न !
बिए एलएलबी चौँथो वर्षका विद्यार्थीलाई गृहमन्त्री खाणको टेलिफोन : जारी परीक्षा निरन्तर राख्ने कि, केही समय स्थगन गर्ने ?
एमालेमा गएका जनप्रतिनिधि पदमुक्त गराउन प्रचण्ड पुगे सर्वोच्च !
बाबुराम र उपेन्द्र फूटको बाटोमा !
गौर हत्याकाण्ड दोहोर्‍याउने अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ’ : उपसभापति गुरुङ
गुप्तांगको दुर्गन्ध कसरि हटाउने ? घरेलु विधिबाट यसरी गर्नुस् उपचार
गुप्ताङ मानिसका अत्यान्तै गोप्य र संवेदनशील अंगहरु हुन् । यही भएका कारण धेरै मानिस गुप्ताङका बारेमा खुलेर कुरा गर्न रुचाउँदैनन् । कतिपय त लाजकै कारण पनि गुप्ताङमा हुने समस्याहरुलाई सहेर बसिरहेका हुन्छन् ।
शरीरभित्र रहेका विकार वस्तु निस्किने प्रमुख द्धार भएका कारण पनि गुप्ताङ फोहोर हुनुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । यस्तै फोहरका कारण गुप्ताङ र वरीपरीको भाग हाम्रो शरीररको अन्य भाग भन्दा बढी दुर्गन्धित हुने गर्दछ ।
गुप्ताङको उचित स्यहार र सफाई नगर्दा यसबाट निस्किने दुर्गन्धले स्वयम् व्यक्तिलाई नै अप्ठेरो बनाइ राखेको हुन्छ ।गुप्ताङको दुर्गन्ध पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी हुँदा उनीहरु पीडित हुने गरेका पाइन्छ । यस्तो समस्याबाट पार पाउन केही घरेलु समाधानका टिप्सहरु तल दिइएको छ ।
दुई चम्चा मेथीलाई एक गिलास पानीमा रातभरी भिजाएर अर्को दिन उठ्ने बित्तिकै खाली पेटमा मेथी छानेर पानी पिउँदा पनि सो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । यस्तो विधि लगातार दुई हप्तासम्म गर्न सकेमा समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । निमको पातलाई पानीमा उमाल्ने र चिसो भइसकेपछि सो पानीले गुप्ताङ्ग धुदा दुर्गन्ध निस्तेज हुन्छ ।
अमला प्राकृतिक रुपमा रक्तशोधक हो र गुप्ताङ्गमा दुर्गन्ध फैलाउने रोग ल्युकोरिया हुनबाट बचाउने भएका कारण यसलाई काँचै अथवा अचारको रुपमा खाने खाने गर्दा पनि उत्तम हुन्छ ।
गुप्ताङ्गको दुर्गन्धबाट पार पाउनका लागि तपाईंले प्रत्येक दिन ८ देखि १० ग्लास पानी पिउनुपर्ने हुन्छ । पानीले शरिरबाट विषादि र जिवाणुलाई हटाउने काम गर्दछ ।
दही खानाले पनि गुप्ताङ्गको दुर्गन्धलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ । यसका अलावा नियमित रुपमा गुप्ताङ्गको सफाई पनि गर्नुपर्छ । सामान्य त पिसाव गरेपछि गुप्ताङ्ग पखाल्ने धेरैको बानी हुदैन तर यदि तपाईमा यस किसिमको समस्या छ भने पिसाव गरेपछि पनि गुप्ताङ्ग धुने गर्नुहोस यसले पनि दुर्गन्ध हटाउन मद्धत गर्छ ।
त्यस्तै तपाईले लगाउने भित्रि बस्त्र पनि सकेसम्म दैनिक परिवर्तन गर्नुस साथै आकर्षक भन्दा पनि सुतीको नै प्रयोग गर्नु राम्रो मानिन्छ । नियमित रुपमा सफा र चिसो पानीले यौनानाङ्गको सफा गरेमा पनि यस्ता समस्याबाट पार पाउन सकिन्छ
प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७७, शुक्रबार २ : ४२ बजे
सरकारले माग्यो औषधि उत्पादकसँग सिटामोलको विवरण
कोरोनाको तेस्रो लहरको रोकथामका लागि सरकारले पालिकासँग समन्वय गरेन: विद्यासुन्दर शाक्य
नेपाल टेलिकमले फोरजी एलटीई नमस्ते वाईफाई विस्तार गर्ने
बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकलाई लाइफ मेडिप्लस अस्पतालमा १०%सम्म छुट
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तका सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान